अनुगमन टोली पुगेपछि धुम्बाराही तरकारी बजारका आलु प्याज व्यापारीको भागाभाग « हातमा खबर
अनुगमन टोली पुगेपछि धुम्बाराही तरकारी बजारका आलु प्याज व्यापारीको भागाभाग
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ आश्विन शुक्रबार १२:१७
काठमाडौं । धुम्बाराही तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्रमा आलु र प्याज बेच्ने ७ जना व्यापारी शुक्रबार बिहानै पसल छोडे हिँडे । त्यहाँ आलु र प्याज बेच्ने ९ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ र २ नम्बर स्टलका व्यापारी थिए । बाँकी पसलमा थिएनन् । बजारमा पानी पसेर आलु र प्याज खत्तम बनायो । स्टल २ का व्यापारी बद्री शिवाकोटी भन्दै थिए—ठूला व्यापारीले गलत गरे होलान् समस्या हामी साना व्यापारीलाई हुन्छ । उनको यो भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । अरु व्यापारी अनुगमन टोली आएको खवर सुनेर पसलबाट हिँडेका हुन् ।
पसल छोडेर गए पनि पङ्खा चलिरहेका थिए । पूजा गर्दा बालेको बत्ती निभेकै थिएन । शिवाकोटीका अनुसार बजारमा पानी पसेर हरेक पसलले कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेका छन् ।
बजारमा मल तथा बीउ बिजन, माछा मासु तथा दुधजन्य खाद्यबस्तुलगायत भान्सामा आवश्यक सबै प्रकारमा सामानका स्टल छन् । तरकारीका लागि मात्रै २०० स्टल छन् । यिनीहरुमध्ये अनुगमन टोली पुग्दा केही पसल बन्द थिए । अनुगमन शुरुवात भएपछि क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै बन्द गर्न थालिए । किन यसो गरेको प्रश्नको उत्तरमा उनीहरु भन्दै थिए—पानी परेर सामान नआएर बेच्नका लागि सामान छैन ।
बजारभित्र रहेको दक्षिणकाली खाद्य तथा किराना पसलमा खुल्ला बेच्न राखिएका दाल चामल, आँटा, मस्यौरालगायत सबै खानेकुरामा ढुसी र ओस आएको थियो । मैदामा चिल्याँसा परेको थियो । त्यहाँबाट जारी बिलमा ठेगाना बल्खु लेखिएको थियो । पसलमा व्यापार गरिरहेकी धनमाया बलामी भन्दैथिइन्—कालो दाल भर्खर ल्याएको । यो दालमा ल्याउँदै कीरा थियो । कालो दालमा मात्र होइन, अरुमा पनि कीरा छ त? प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन्—एउटाबाट फिँजियो होला ।
अनि सबै सामान त ओसिएको छ त? प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भनिन्—पानी परेर सबै ओसियो । अनुगमन टोलीले बिक्रीका लागि अयोग्य २१ किलो मैदा, ४५ किलो आँटा, १० किलो सोयाबिन बरामद गरेको छ भने कीरा देखिएको ७० किलो मासको दाल, ९० किलो रहरको दाल बिक्री रोक्का गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले आजै भाटभटेनीको चुच्चेपाटीस्थित प्याकेजिङ् स्थलको पनि अनुगमन गरेको छ ।
अबदेखि कोभिड– १९ प्रेस ब्रिफिङ दैनिक नहुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अबदेखि सातामा दुई दिनमात्रै कोभिड– १९ प्रेस
तातोपानी नाका पुनःसञ्चालन,मालवाहक कन्टेनर भने बिहीबार मात्रै नेपाल भित्रिने
चौतारा । नेपाल-चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका औपचारिक रुपमा आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको
१,९५४ जना कोरोना संक्रमित थपिए,२,९८१ जना डिस्चार्ज,११ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९ सय ५४ जना संक्रमित
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको यही कातिक १५ देखि १७ गतेका